ဘောလုံးကမ်ဘာမှ အကောငျးဆုံး မနျနဂြောနှငျ့ ကစားသမားတို့ကွား ဆကျဆံရေး ၅ ခု – Sports A2Z
ဘောလုံးကမ်ဘာမှ အကောငျးဆုံး မနျနဂြောနှငျ့ ကစားသမားတို့ကွား ဆကျဆံရေး ၅ ခု
မျောရငျညိုနဲ့ ဒရော့ဘာ – ခယျြလျဆီး
” မစ်စတာမိုဗဈချြ…. ခငျဗြားစကားမြားမနနေဲ့။ အခု ငှပေုံပေးပွီး ဒရော့ဘာကို အခုချေါပေးဗြာ ” …. ဒီစကားက ခယျြလျဆီးကို မျောရငျညိုရောကျရှိလာစဥျက လူဝယျစာရငျးမှာ ဒိတျဒိတျကွဲတှကေို ကြျောပွီး ဒရော့ဘာကို တောငျးဆိုခဲ့တဲ့ မျောရငျညိုရဲ့ သမိုငျးဝငျစကားပါ။
၂၀၀၄ ခုနှဈမှာ ပေါငျ ၂၄ သနျးနဲ့ ခယျြလျဆီးက အမှနျတကယျဝယျယူခဲ့ပွီး ဒရော့ဘာနဲ့ မျောရငျညိုရဲ့ ပေါငျးစညျးမှုက ပရီးမီးယားလိဂျတခတျေကို ဖွဈစခေဲ့တယျ။ ခယျြလျဆီးကို မျောရငျညို နောကျတကွိမျထပျနညျးပွတော့လညျး ဒရောဘာကိုပဲ ထပျချေါခဲ့သလို အိုငျဗရီကို့ဈသားက အပွာရောငျလနျဒနျမှာ ပရီးမီးယားလိဂျဖလား ၄ လုံးနဲ့ ခနျြပီယံလိဂျဖလား ၁ လုံး အောငျမွငျခဲ့တယျ။
အာဆငျဝငျးဂါးနဲ့ အှနျနရီ – အာဆငျနယျ
အဖနေဲ့သားတှလေို သိပျခဈြခဲ့ကွတဲ့ ဆရာတပညျ့နှဈဦးဖွဈပွီး အှနျနရီရဲ့အဆိုအရ အာဆငျဝငျးဂါးဟာ သူ့ရဲ့ဘောလုံးဦးနှောကျကို နောကျတဆငျ့​မွငျ့စခေဲ့ပွီး ဘောလုံးမှာ ဦးနှောကျကို နှိုးဆှနိုငျခွငျးက ဘယျလောကျအလုပျဖွဈစသေလဲဆိုတာကို အလငျးဖှငျ့ပေးသူလို့ ညှနျးထားရတဲ့အထိပါ။
အာဆငျဝငျးဂါးဟာ ကစားသမားတိုငျးရဲ့ လမျးညှနျဆရာဖွဈခဲ့ခွငျးဟာ အှနျနရီနဲ့ပတျသကျရငျတော့ အထူးတလညျသကျရောကျမှု ရှိခဲ့ပွီး တနိုငျငံတညျးသားခငျြးလညျးဖွဈနတေဲ့ သံယောဇဥျတှကေ ထငျရှားခဲ့သလို ပွငျသဈတိုကျစဈမှူးဟာ လကျရှိပရီးမီးယားလိဂျရဲ့ ထာဝရအကွီးကယျြဆုံးကစားသမားအဖွဈ Hall of Fame မှာ အသိအမှတျပွုခံထားရတာလညျးဖွဈပါတယျ။
ဖာဂူဆနျနဲ့ ရျောနယျလျဒို – ယူနိုကျတကျ
ဘောလုံးလောကမှာ သူ့ရဲ့ဖခငျက ဖာဂူဆနျပဲလို့ ရျောနယျလျဒိုက အတိအလငျးထုတျပွောဖူးသလို သူက ဖာဂူဆနျရဲ့ နညျးပွဘဝမှာ ထာဝရအကောငျးဆုံး ချေါယူမှုအဖွဈလညျး သတျမှတျခံထားရတယျ။
ကြောကျရိုငျးတုံးရျောနယျလျဒိုကို ပရီးမီးယားလိဂျဖလား ၃ လုံး၊ ခနျြပီယံလိဂျဖလား ၁ လုံးနဲ့အတူ ဘယျလှနျဒေါဆုကိုပါ ရရှိစခေဲ့ပွီး အသှေးအမှေးသဈကို ဖနျတီးပေးခဲ့တဲ့ ဖာဂူဆနျက ဒီနရေ့ျောနယျလျဒိုရဲ့ အုတျမွဈကို ခခြဲ့သူအဖွဈ သူတို့နှဈဦးရဲ့ ဆရာတပညျ့၊ သားအဖဆကျဆံရေးကို ဘောလုံလောကမှာ လကျခံထားရတာပါ။
ဂှာဒီယိုလာနဲ့ မကျဆီ – ဘာစီလိုနာ
၂၀၀၈ ခုနှဈမှာ ဘာစီလိုနာနညျးပွဖွဈလာတဲ့ ပပျဂှာဒီယိုလာရဲ့ ဦးဆောငျမှုအောကျမှာ မကျဆီက ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံးကစားသမားဖွဈလာခဲ့သလို သူ့ရဲ့ ပှဲတပှဲအပျေါအမွငျတှဟော ထူးခွားလှနျးလှတယျဆိုတဲ့ မကျဆီရဲ့ စကားက ပေါ့ပေါ့တနျတနျမဟုတျခဲ့ပါဘူး။
ဂှာဒီယိုလာက မကျဆီကို False9နရောမှာ အသကျသှငျးခဲ့သလို ပွိုငျဘကျခံစဈတိုငျးကို ဒုက်ခအရောကျဆုံးဖွဈအောငျ လုပျနိုငျခဲ့တဲ့ ကစားဟနျတညျဆောကျမှုလညျးဖွဈခဲ့တယျ။ တရာသီတှငျး ဖလား ၆ လုံးအောငျမွငျမှုအထိ ရောကျခဲ့တဲ့ ဆရာဟောငျးနဲ့ ပွနျလကျတှဲမယျ့ မကျဆီရဲ့ အေလားအလာတှကေိုလညျး မွငျနရေပါတယျ။
ရေးနပျဈ မီရှဲလျနဲ့ ယိုဟနျခရိုကျဖျ – အိုငျးယတျဈ၊ ဘာစီလိုနာ၊ နယျသာလနျ
ဘောလုံးဒဿနတှကေို ဆနျးသဈစခေဲ့တဲ့ ဂန်ထဝငျနှဈဦးဖွဈပွီး အိုငျးယတျဈ၊ ဘာစီလိုနာနဲ့ နယျသာလနျအသငျးတှကေို လှမျးမိုးခဲ့တဲ့ Total Football ကစားဟနျရဲ့ ပဲ့ကိုငျရှငျတှလေို့ဆိုရငျ မမှားသလို ခရိုကျဖျကတော့ ကစားသမားအဖွဈ နညျးပွဘဝမှာပါ ထငျရှားခဲ့တာပါ။
အိုငျးယတျဈ၊ နဲ့ ဘာစီလိုနာမှာ သူ့လကျရာတှကေ စှဲထငျနဆေဲဖွဈပွီး လူငယျအကယျဒမီကစလို့ ကှငျးထဲက ကစားဟနျကိုပါ လှမျးမိုးခဲ့သလို မီရှဲလျကတော့ အိုငျးယတျဈမှာ ခရိုကျဖျနဲ့အတူ အောငျမွငျခဲ့သလို လကျရှိနယျသာလနျဘောလုံးလောကကို အကြိုးပွုနဆေဲ ဦးဆောငျမှုနဲ့အတူ ထငျရှားခဲ့ပွီး ခရိုကျဖျအလေးစားရဆုံး ဆရာသမားလညျးဖွဈပါတယျ။
မော်ရင်ညိုနဲ့ ဒရော့ဘာ – ချယ်လ်ဆီး
” မစ္စတာမိုဗစ်ခ်ျ…. ခင်ဗျားစကားများမနေနဲ့။ အခု ငွေပုံပေးပြီး ဒရော့ဘာကို အခုခေါ်ပေးဗျာ ” …. ဒီစကားက ချယ်လ်ဆီးကို မော်ရင်ညိုရောက်ရှိလာစဉ်က လူဝယ်စာရင်းမှာ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲတွေကို ကျော်ပြီး ဒရော့ဘာကို တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ မော်ရင်ညိုရဲ့ သမိုင်းဝင်စကားပါ။
၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ ပေါင် ၂၄ သန်းနဲ့ ချယ်လ်ဆီးက အမှန်တကယ်ဝယ်ယူခဲ့ပြီး ဒရော့ဘာနဲ့ မော်ရင်ညိုရဲ့ ပေါင်းစည်းမှုက ပရီးမီးယားလိဂ်တခေတ်ကို ဖြစ်စေခဲ့တယ်။ ချယ်လ်ဆီးကို မော်ရင်ညို နောက်တကြိမ်ထပ်နည်းပြတော့လည်း ဒရောဘာကိုပဲ ထပ်ခေါ်ခဲ့သလို အိုင်ဗရီကို့စ်သားက အပြာရောင်လန်ဒန်မှာ ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလား ၄ လုံးနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား ၁ လုံး အောင်မြင်ခဲ့တယ်။
အာဆင်ဝင်းဂါးနဲ့ အွန်နရီ – အာဆင်နယ်
အဖေနဲ့သားတွေလို သိပ်ချစ်ခဲ့ကြတဲ့ ဆရာတပည့်နှစ်ဦးဖြစ်ပြီး အွန်နရီရဲ့အဆိုအရ အာဆင်ဝင်းဂါးဟာ သူ့ရဲ့ဘောလုံးဦးနှောက်ကို နောက်တဆင့်​မြင့်စေခဲ့ပြီး ဘောလုံးမှာ ဦးနှောက်ကို နှိုးဆွနိုင်ခြင်းက ဘယ်လောက်အလုပ်ဖြစ်စေသလဲဆိုတာကို အလင်းဖွင့်ပေးသူလို့ ညွှန်းထားရတဲ့အထိပါ။
အာဆင်ဝင်းဂါးဟာ ကစားသမားတိုင်းရဲ့ လမ်းညွှန်ဆရာဖြစ်ခဲ့ခြင်းဟာ အွန်နရီနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ အထူးတလည်သက်ရောက်မှု ရှိခဲ့ပြီး တနိုင်ငံတည်းသားချင်းလည်းဖြစ်နေတဲ့ သံယောဇဉ်တွေက ထင်ရှားခဲ့သလို ပြင်သစ်တိုက်စစ်မှူးဟာ လက်ရှိပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ ထာဝရအကြီးကျယ်ဆုံးကစားသမားအဖြစ် Hall of Fame မှာ အသိအမှတ်ပြုခံထားရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဖာဂူဆန်နဲ့ ရော်နယ်လ်ဒို – ယူနိုက်တက်
ဘောလုံးလောကမှာ သူ့ရဲ့ဖခင်က ဖာဂူဆန်ပဲလို့ ရော်နယ်လ်ဒိုက အတိအလင်းထုတ်ပြောဖူးသလို သူက ဖာဂူဆန်ရဲ့ နည်းပြဘဝမှာ ထာဝရအကောင်းဆုံး ခေါ်ယူမှုအဖြစ်လည်း သတ်မှတ်ခံထားရတယ်။
ကျောက်ရိုင်းတုံးရော်နယ်လ်ဒိုကို ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလား ၃ လုံး၊ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား ၁ လုံးနဲ့အတူ ဘယ်လွန်ဒေါဆုကိုပါ ရရှိစေခဲ့ပြီး အသွေးအမွေးသစ်ကို ဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့ ဖာဂူဆန်က ဒီနေ့ရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ အုတ်မြစ်ကို ချခဲ့သူအဖြစ် သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ ဆရာတပည့်၊ သားအဖဆက်ဆံရေးကို ဘောလုံလောကမှာ လက်ခံထားရတာပါ။
ဂွာဒီယိုလာနဲ့ မက်ဆီ – ဘာစီလိုနာ
၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ ဘာစီလိုနာနည်းပြဖြစ်လာတဲ့ ပပ်ဂွာဒီယိုလာရဲ့ ဦးဆောင်မှုအောက်မှာ မက်ဆီက ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးကစားသမားဖြစ်လာခဲ့သလို သူ့ရဲ့ ပွဲတပွဲအပေါ်အမြင်တွေဟာ ထူးခြားလွန်းလှတယ်ဆိုတဲ့ မက်ဆီရဲ့ စကားက ပေါ့ပေါ့တန်တန်မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။
ဂွာဒီယိုလာက မက်ဆီကို False9နေရာမှာ အသက်သွင်းခဲ့သလို ပြိုင်ဘက်ခံစစ်တိုင်းကို ဒုက္ခအရောက်ဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ကစားဟန်တည်ဆောက်မှုလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်။ တရာသီတွင်း ဖလား ၆ လုံးအောင်မြင်မှုအထိ ရောက်ခဲ့တဲ့ ဆရာဟောင်းနဲ့ ပြန်လက်တွဲမယ့် မက်ဆီရဲ့ အေလားအလာတွေကိုလည်း မြင်နေရပါတယ်။
ရေးနပ်စ် မီရှဲလ်နဲ့ ယိုဟန်ခရိုက်ဖ် – အိုင်းယတ်စ်၊ ဘာစီလိုနာ၊ နယ်သာလန်
ဘောလုံးဒဿနတွေကို ဆန်းသစ်စေခဲ့တဲ့ ဂန္ထဝင်နှစ်ဦးဖြစ်ပြီး အိုင်းယတ်စ်၊ ဘာစီလိုနာနဲ့ နယ်သာလန်အသင်းတွေကို လွှမ်းမိုးခဲ့တဲ့ Total Football ကစားဟန်ရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင်တွေလို့ဆိုရင် မမှားသလို ခရိုက်ဖ်ကတော့ ကစားသမားအဖြစ် နည်းပြဘဝမှာပါ ထင်ရှားခဲ့တာပါ။
အိုင်းယတ်စ်၊ နဲ့ ဘာစီလိုနာမှာ သူ့လက်ရာတွေက စွဲထင်နေဆဲဖြစ်ပြီး လူငယ်အကယ်ဒမီကစလို့ ကွင်းထဲက ကစားဟန်ကိုပါ လွှမ်းမိုးခဲ့သလို မီရှဲလ်ကတော့ အိုင်းယတ်စ်မှာ ခရိုက်ဖ်နဲ့အတူ အောင်မြင်ခဲ့သလို လက်ရှိနယ်သာလန်ဘောလုံးလောကကို အကျိုးပြုနေဆဲ ဦးဆောင်မှုနဲ့အတူ ထင်ရှားခဲ့ပြီး ခရိုက်ဖ်အလေးစားရဆုံး ဆရာသမားလည်းဖြစ်ပါတယ်။
13 May နောကျဆုံးရ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျသတငျးမြား စုစညျးမှု
ရာဇဝတျမှုကို လကျခံခဲ့ရတဲ့ ဆိုးလျရှားကို “အပွဈမယူ ခှငျ့လှတျပေးမှာပါ” ကလော့ပျ